के हो HiSET ™? बारेमा HiSET ™ सिक्न | USAHello | USAHello
HiSET ™ कि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले जस्तै ज्ञान छ भनेर देखाउँछ एक उपाधि छ. तपाईंको HiSET ™ परीक्षण पारित तपाईं बढी सफल हुन मदत गर्न सक्छ. तपाईं राम्रो काम प्राप्त गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छन् र कलेज जान.
को HiSET ™ परीक्षण के हो?
को HiSET ™ आफ्नो समझ र ज्ञान को परीक्षण छ. HiSET ™ के हो - नाम HiSet ™ हाई स्कूल Equivalency परीक्षण को लागि छोटो छ. को HiSET ™ परीक्षण पारित तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने एक व्यक्ति जस्तै ज्ञान र सीप छ देखाउँछ
को HiSET ™ परीक्षण कस्तो छ?
परीक्षण लाग्न र धेरै विषय विभाजित छ. तपाईं अलग दिनमा विषयहरू लाग्न सक्छ. तपाईं कम्प्युटरमा परीक्षण हुनेछ.
त्यहाँ परीक्षण मा पाँच विषयहरू छन्: सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, पढाइ र लेखन.
म theHiSET ™ परीक्षण को लागि कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ?
FindHello’s free online classes को परीक्षण मा प्रत्येक विषय कवर. जब तपाईं तैयार तपाईं एक वर्ग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा विद्यार्थी दुई महिना दुई हप्ता भित्र एक विषय समाप्त. तपाईं सुरु र कुनै पनि बेला रोक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पाठ फेरि कब्जामा लिनु सक्नुहुन्छ. के तपाईं सुरु गर्न चाहनुहुन्छ जो विषय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं हरेक राज्य मा HiSET ™ परीक्षण लिन सक्दैन. जो परीक्षण आफ्नो राज्य प्रस्ताव छ पत्ता लगाउन तलको तालिका हेर्न.
यदि आफ्नो राज्य HiSET ™ प्रदान गर्दैन, तपाईं अझै पनि एक उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं TASC परीक्षण वा GED लाग्न सक्छ® आफ्नो राज्य मा परीक्षण. फेरि हेर्न तालिका हेर्न जो एक.
म HiSET परीक्षण कसरी लिन गर्छन्?
Take our free GED/HiSET/TASC practice test to see if you are ready to pass the tests now, वा के तपाईं थप अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने साइन इन गर्नु अघि.
को HiSET परीक्षण कसरी लिन
तपाईं लागि दर्ता र HiSET परीक्षण लिन आवश्यक जानकारी पाउन. जब तपाईं सबै विषयहरू पारित गरेको छ, तपाईं एक उपाधि प्राप्त हुनेछ.
को HiSET कसरी लिन परीक्षण
को HiSET परीक्षण मा के?